I-Bursa Governorship Ithatha Isinyathelo se-Uludağ - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmaraI-16 BursaI-Bursa Governorship Ithatha Isenzo se-Uludağ
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş I-16 Bursa, JIKELELE, Isifunda saseMarmara, TURKEY, TELPHER 0
umbusi waseBursa uthuthele ku-uludag
Ihhovisi Bursa likahulumeni uye walungisa umbiko olunzulu ngifuna izinsuku ubudala, kuqala ski resort eTurkey. Umbiko, ogcizelela ukwenziwa kwesimanjemanje kwe-Uludağ, wethulwa e-Ankara.
ski resort lokuqala eTurkey of Uludag, kusho uNdunankulu Recep Tayyip Erdogan kumemezela "xnumx't izivakashi eziyizigidi ezingu 2023" wakhuphuka futhi target.
I-Uludağ, eyaqanjwa ngegama lesihlahla okuthiwa ia Mysia indeki ngesikhathi soMbuso WaseRoma, yaqanjwa ngokuthi "iMark Mountain birlikte ngemuva kokunqoba kwa-Ottoman isifunda."
I-Uludağ, eyathola igama layo njengamanje ngesikhathi seRepublican, yayiyindawo eyintandokazi yazo zonke izimpucuko. Ngokwakhiwa kwehhotela elincane e-1926, izisekelo zokuqala zabekwa ukushushuluza e-Uludağ. E-1933, ukushushuluza osezingeni elifanele kuqale ngokusemthethweni e-Uludağ ngomgwaqo osuqediwe.
SIZOBUYELA KUSUKU LOKUQALA
I-3, eyake yaba intandokazi yabavakashi bendawo nabakwamanye amazwe, ayinandawo ngenkathi ebusika yanyanga zonke, ikakhulukazi e-Uludağ, okuthandwa yiRussia.
Izinkinga zokupaka nezokuhamba zokuxazulula izinyathelo ezithathiwe ngeke zibe ezanele nezindawo ezintsha zokushushuluza ngombono wokuvuselelwa kobukhosi beBursa, u-Uludag uthathe isinyathelo sokuqala sokubuyela ezinsukwini zakudala.
Ngokusho kwephephandaba iSabah u-Ali Altundaş, i-70 ilungiselele umbiko ogcwele we-Uludağ yawethula e-Ankara ukuze ifake isandla enhlosweni yezivakashi ezizigidi.
Umbiko uhlaziye izihloko eziningi ezisukela kwabaseTurkey bakhetha iBulgaria ukushushuluza inqubomgomo yentengo e-Uludag.
Ukuvela kwansuku zonke kwezakhamizi ukuze kuguqulwe imithambeka ye-ski kule ndawo epikinikini kwaphawulwa.
Ngokwesibalo sombiko othunyelwe eMnyangweni Wezamasiko Nezokuvakasha, kucaciswe ukuthi uma i-Uludağ yenziwe kabusha futhi izinkinga zayo zixazululwa, izoba negalelo kwezokuvakasha ezweni.
UMalatya Governorship uxwayisa ngokupuniza 09 / 05 / 2012 Malatya Governorship, i-TCDD 5. Ukuqondiswa kwezemigwaqo kwemizila yezitimela esifundeni kuthiwa ukuthungatha, abanikazi abancane nezinkomo baxwayisa. Esikhathini esitatimendeni esibhaliwe esivela kuMbusi WaseMalatya, eNarl-Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, eMalatya-Çetinkaya naseVan-Kapıköy iziteshi zokuvikela ukuhlanzeka kwe-ballast ukuze kuvikelwe ukuhlanzeka kwemithi yamakhemikhali. Isitatimende, ngokuphathelene nokuphila nokuphepha kwempahla emkhakheni wokungabonakali kanye nezakhamizi kufanele kube yisixwayiso esiqaphile sokwethulwa kwezilwane. Umthombo: www.malatyaguncel.com
I-Van Governorate, i-Chemical Paths emgwaqweni weSitimela Okubikiwe ukuthi kwenziwe. 11 / 05 / 2012 Van Governorship, ukuvikela ukuhlanzeka kwe-ballast emgwaqweni wesitimela ukulwa nokulwa kwamakhemikhali. Isitatimende esenziwe Van yokubusa, Emhlophe-Malatya, Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Cetinkaya futhi Van-Kapıköy iziteshi emzileni wesitimela phakathi 7-23 Meyi 2012 phakathi nezinsuku zizokwenziwa chemical ukhula ukulondoloza ukuhlanzeka isikebhe sizinze, impilo nokuphepha impahla Ngokusho kwezilwane ezishaye imfuyo akufanele zifakwe emasimini, kusho yena. Umthombo: www.haberler.com
Isexwayiso sikaMqondisi kaDiyarbakır 29 / 03 / 2014 Railways ku Diyarbakır Governor Imithi Isaziso: Diyarbakir yokubusa ka Malatya futhi Diyarbakir-Kurtalan Yolçatı-no-Tatvan ujantshi mzila Yolçatı waxwayisa izakhamuzi ngenxa sishaye msebenzi. Isitatimende esenziwe Diyarbakır Governor Malatya-Yolçatı-Diyarbakir-Kurtalan futhi Yolçatı-Tatvan emzileni wesitimela phakathi iziteshi 31 March- 11 chemical Ukuhlakula ukhula kufanele kwenziwe ukuze kulondolozwe ukuhlanzeka isikebhe sizinze phakathi kuka-Ephreli 2014 ngosuku olushiwo. Isitatimende, impilo nokuphepha mayelana nempahla okufanele isetshenziswe ezindaweni lapho isicelo sasixwayiswa ukungangezi izilwane.
Samsun Governorship izoletha ndawonye amalungu omfutho ngesitimela esisheshayo 28 / 07 / 2015 I-Governorate yakwaSamsun izohlangana namalungu omshini ngesitimela esisheshayo: I-Governorate yakwaSamsun izokwenza uhambo lwe-Ankara-Konya High-Speed ​​Train namalungu omshini ukuze kukhishwe iphrojekthi ye-Samsun-Ankara High-Speed ​​Train. I-Samsonun Governorship Press kanye noMphathi wezokuXhumana koMphakathi uFatma Dursun Atalay, esitatimendeni sakhe esibhaliwe, uMbusi Ibrahim Sahin ngaphansi kohlelo lwe-Samsun - Ankara High Speed ​​Train project uzohlelwa ngokudluliselwa. Echaza ukuthi lolu hlelo luzokwenziwa ukuze kusetshenziswe indawo, u-Atalay uthe, "I-31 July 2015 izoba ngoLwesihlanu ne-Ankara - Konya High Speed ​​Train ngamalungu omnyunyana".
Isitatimende sokuhlasela isitimela seBingöl Governor's Office 31 / 07 / 2015 Ihhovisi likaMengameli waseBingöl lenkomba yokuhlaselwa isitimela: Ihhovisi likaMengameli waseBingöl, isitimela sase-Ankara-Tehran Trans Trans-Asia, abantu abasebasha eBingöl, isitatimende mayelana nokuhlasela kwe-gedli. Isitatimende komzila ngezandla okwami ​​waloba ukuthi ezilimele izimoto ezimbili ekuhloleni ngabe ukuhlaselwa owabeka kusengaphambili, zonke izinhlobo zemisebenzi abaphazamisa ukuthula izakhamizi, ngokushesha ukuba angenele, yabhekisela ukuthi banikezwe ithuba lezi kanye efanayo izenzo. Lesi sitatimende sikhishwe wake washo la mazwi alandelayo: "Bingöl Young wesifunda Iqabane Village (e 27-28) isikhundla, Elazig Tatvan ujantshi ngesikhathi kubhekwa ku amakhilomitha xnumx'nc, ngesikhathi ukudlula yakamuva izinqola umthwalo aphethe kusengaphambili ngamalungu SRS ...
UMalatya Governorship uxwayisa ngokupuniza
I-Van Governorate, i-Chemical Paths emgwaqweni weSitimela Okubikiwe ukuthi kwenziwe.
Isexwayiso sikaMqondisi kaDiyarbakır
Isitatimende sokuhlasela isitimela seBingöl Governor's Office
I-Samsun Governorate iqoqe amalungu omfutho ngesitimela esisheshayo
I-Konya Governorate isixwayisa ngokupunika emigqeni ye-YHT
I-Mersin Governorship High Voltage Isexwayiso kwizakhamizi
UNgqongqoshe u-Arslan uvakashele iKocaeli Governorship
Abaphathi be-Kocaeli bafuna i-Adapazarı Express